Y: ---------! (kan hin nyaatamne yoo dhahe itt kolfama, yoo callise kan gaafate bakka gad dhiisa).
Jireenyi saalaa bakka dheebochaati. Bisaan malee yeroo dheeraaf turuu dandaha. Hoomaan jiraata. Ilmoon akkuma dhalatteen warra waliin fiiguu dandeessi. Dhaltuun waggaa 1½- 2ti ariisaa geessi.. Rimaan ji’a 8½ - 10ti dhalata. Parkii Hawaas keessatt hedduutu argama
Osilleen marga dheeddi. Ha’oon nyaatti. Halala hin guurtu liqimsitee kan daakame gadi baaftee deebistee nyaatti. Ilkaan fulduree akka kan hantuutaa yeroo hunda guddata. Bishaan kale keessatt waan kuufatuuf dheebuu dandeesi. Osiileen kattaatti galti, tuutaan jiraatti. Rimaa naannaa ji’a saddeeti gahu booda hanga ilmoo afurii dhalti.ariisaaf naannaa waggaa fi walakkaati geessi.
Injiraan sadanuu dhiiga nama xuuxan malee hin jiraatan. Kanaaf dhortuu jedhamu. Nama hooqsisanii madaan saa dhibee biraa dhalchuu dandaha. Falli saa qulqullina ofii eeggachuu, rifeensa haaddachuu, uffata injiraan qabu affeeluu, gatuu yk qoricha itt facaasuu, meeshaa nama qabu lagachuu dha. Injiraan kofaa, injiraan caalaa torbaan qabaa fakkaata. Ciniin kan mataa ifati mullachuu, injiraan wayyaa morma nama irra yaa’uun, amba keessa kofa, mataa fi dhagna hooqsisisun nama qaanessuu dandahu. Keessaammoo ijoolleen barattu akka jara biraa hin faalleef waabarii ari’amuu waan dandeessuuf yeroo hunda ilaaluun gaarii dha. Jedhee abbaan hoduu.